10 / 12 / 2018 | RayHaber | raillynews
[18 / 02 / 2020] ZTAŞIT Waxay Nolosha Nolosha ku Noqon doonaan Bergama	35 Izmir
[17 / 02 / 2020] Khadkii Eminönü Alibeyköy Tram wuxuu gaari doonaa dhamaadka 2020	34 Istanbul
Maalinta: Diseembar 10, 2018
Kahramanmaras North Ring Road 3.Etap waxay ka shaqeysaa Horumarka
Marxaladda saddexaad ee Wadada 'ring ring Northern', oo ay si dhakhso ah u dhiseyso Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalada, ayaa shaqadu si xawli ku socda ku socdaa. Qaybta bari ee magaalada, waxay ka bilaabataa wadada Gaziantep waxayna ku xirnaan doontaa wadada Kayseri ee [More ...]
Kocaoğlu: "Ma aha oo kaliya geedaha laakiin sidoo kale gendarme"
Duqa Magaalada Magaalada İzmir Aziz Kocaoğlu wuxuu sheegay inay ka ilaalinayaan dhul qiimo leh khatarta kirada iyadoo ay ugu mahadcelinayaan Kaymaha 'Inciralt Forest Urban Forest' oo ay aasaaseen iyagoo dhir u ah 30 kun oo geed. [More ...]
Garoonka diyaaradaha ee Istanbul waxaa ku yaalla 40 Thousand 52 rakaabkii Bishii 11aad
Iyada oo imaatinka iyo bixida laga raaco garoonka diyaaradaha ee Istanbul ilaa dhamaadka bisha Noofembar, 40 kun oo 52 rakaab ah ayaa safray. Wejiga koowaad ee 29 ayaa la furay bishii Oktoobar iyadoo Turkish Airlines (THY) ay qorsheysay duullimaadyo ay ku tagi doonto magaalooyinka qaar. [More ...]
Izmit YHT Stairs
Saldhigga tareenka ee Izmit wuxuu sii wadaa inuu u adeego dhammaystirka Tareenka Xawaaraha Sare, halka marinkii hore ee HAT uusan ka farxin muwaaddinka. [More ...]
Safar Farsamo ah oo loo geynayo Buundada Shabeelle ee Baasaliilayaasha
IMO Bursa Laanteeda waxay sii wadaysaa booqashadeeda farsamo si kor loogu qaado horumarka xirfadeed ee xubnaheeda ayna hubiso inay aragto mashariicda meesha yaala. Markii laanta IMO Bursa la dhammeeyo, xubanaha laanta IMO Bursa Laanta [More ...]
Türel wuxuu dhagaystay dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa gaadiidka
Duqa magaalada Menderes Türel, oo la kulmay ganacsatada gaadiidka, ayaa tilmaamay in olole aflagaado ah laga bilaabay mowduuca ganaaxyada taraafikada ee laga soo qaado TEDES-EDS wuxuuna yidhi: daha Dhismaha nidaamka lama hirgelin. Waa maxay ciqaabta [More ...]
RayHaber 10.12.2018 Warbixinta Shirka
Gawaarida gawaarida ayaa la dhisi doonaa halkii ay ka gudbi lahaayeen Heerka Shidaalka oo la iibsan doono
Gaadiidka EGO Basaasiin
Degmada Ankara ee caasimada, arrimaha caafimaadka bulshada ee xiriirka dhaw la leh daraasadaha kiiska waa la saxeexay. Iyada oo la tixgalinayo cudurada xilliyeed iyo cudurada faafa, Agaasinka Guud ee EGO wuxuu sameeyay nadiifin buuxda gaar ahaan basaska ay badanaa adeegsadaan muwaadiniintu. [More ...]
Mashruuca Makhaayada İzmir Makhaayada Ma Ogtahay Maalinta Koowaad Ee Ilaa IZBAN
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay abaabushay dhamaan howlaheedii iyada oo loo adeegsanayo gaadiidka dadweynaha sababtuna tahay shaqo joojinta IZBAN ee saaka bilaabatay laakiin uma aysan oggolaan fowdo in kasta oo ay ahayd maalintii ugu horraysay ee toddobaadkan. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo leh boqolkiiba TCDD [More ...]
YHT Passenger Target 2018 Million ee 8
Baahida rakaabka ayaa sanadkasta sii kordheysa kunka kiloomitir 213 kiiloomitir oo xawaare xawaare sare leh oo ay maamusho Agaasimaha Guud ee Gaadiidka TCDD. Ankara-Eskişehir ee 2009, Ankara-Konya at 2011, Eskişehir-Konya at 2013, Ankara-Eskişehir-İstanbul iyo Konya-İstanbul ee 2014 [More ...]
Weerar ayaa ku bilowday IZBAN Gre Strike Jajabka oo ay la jiraan injineernimada hawlgabka
Nidaamka xaafadaha magaalada Izmir wuxuu bilaabay shaqo joojin saaka ayada oo la adeegsanayo xuquuqda dastuuriga ah ee shaqaalaha 342 ee İZBAN. Dhanka kale, maamulka 'BZBAN wuxuu sii waday duulimaadyadiisa inta udhaxeysa Çiğli-Airport iyo todobo makaan oo howlgab ah oo u shaqeynaya sidii dib u habeyn lagu sameeyo shaqa joojinta'. [More ...]
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan horjooge Iskraawi
Maamulka İZBAN wuxuu sheegtey in İzmir Laantiisa Ururka Shaqaalaha Tareenka (Demiryol-İş), oo go’aansaday inuu shaqo joojiyo berrito, uu dhibaateeyay dadka reer İzmir iyo shaqaalaha, iyo in iskucelceliska mushaharka ay sababeen soo jeedinta 22 ee İzmir [More ...]
Dambiyadaada kuma jirtid musiibo tareemo ah oo ku taal magaalada Çorlu
Bilgin, oo afar qof oo ehela ah ku dhintey shilka, ayaa jawaab ka bixiyay Maareeyaha Guud ee TCDD Apaydın oo sheegay in roobka uu mas'uul ka ahaa musiibadii tareenka ee ka dhacday Çorlu: "Ma ahan roobka masuulka ka ah, laakiin kuwii sameeyay bayaankan" 8 [More ...]
Shaqaalaha Qandaraaska ah ee Tareennada
Ku-xigeenka CHP Niğde Omer Fethi Gurer, agaasimaha guud ee TCDD ee guddiga SEE oo ah halka miisaaniyadda looga dooday, ayaa soo qaaday dhibaatada shaqaalaha khibradda u leh hay'adda. Ömer Fethi Gürer wuxuu cadeeyay in shaqaalaha qandaraaslaha hoosaadku wali shaqeeyaan. [More ...]
RayHaber 18.02.2020 Warbixinta Shirka
Dhir daaqaya oo horjoogsanaya aragtida aragtida gaadiidka safarka ah ee Kandira waa la caddeeyay
ZTAŞIT Waxay Nolosha Nolosha ku Noqon doonaan Bergama
Maanta taariikhda: 18 Febraayo oo leh 1856 Reform Edict
Khadkii Eminönü Alibeyköy Tram wuxuu gaari doonaa dhamaadka 2020